थप ९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, नेपालमा संक्रमितको संख्या ७ सय ७२ पुग्यो – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/थप ९० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, नेपालमा संक्रमितको संख्या ७ सय ७२ पुग्यो
काठमाडौं, १३ जेठ । नेपालमा थप ९० जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । मंगलबार एकै दिनमा ९० जना संक्रमितको पुष्टि भएसंगै नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या ७ सय ७२ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘तपाईँ कहाँ हो? तपाईँ मसँग झुट बोलिरहनु भएको हो?’उनले प्रश्नपछि प्रश्न गरिन्।’जो हो त्यही भन्नु।’भिडियो कलबाटै उनले कौतुहलता सहित प्रश्न गरिन्। उनले अब श्रीमतीलाई झुट बोल्न सक्दैन थिए। तरऽ उनले हत्तपत्त केही भन्न सकेनन्।अन्ततः नभनिरहन पनि सकेनन्।
‘मेरो रिपोर्टमा पोजेटिभ देखायो। त्यसैले कोठाबाट यहाँ ल्याएर राखेका छन्,’ उनले श्रीमतीलाई भने।श्रीमानको कोरोना सङ्क्रमण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सुनेपछि उनको होसहवास नै गुम्यो। मन चिसो भयो। हातखुट्टाहरू कापे जस्तै भए। दिनै सङ्क्रमितको सङ्ख्या र मृत्युको खबर सुनिरहेका बेला आफ्नै श्रीमानले आफूलाई कोरोना भएको छ भन्दा कसको मनले ठाउँ नछोड्ला र! उनमा पनि भयो त्यही।
पोशाक लगाउँछिन्,स्कुटर लिएर निस्किन्छिन्। साथमा स्यानिटाइजर, मास्क, पन्जा, चस्मा लगायत कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिन लगाउने सुरक्षाका सामाग्री भने टुट्दैन। झन् आफ्नै विरादरीका मानिसमा कोरोना सङ्क्रमण देखिन थालेपछि झनै सजकता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। त्यसैले उनी सचेत छिन्।पहिलोपोस्ट बाट साभार